Shabaab iyo Daacish waa isku mid! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Shabaab iyo Daacish waa isku mid!
Abu Mujaahid Al-gawracaawi, markii koowaad wuxuu soo muuqday isaga oo madax duuban oo mindi dheer la dul taagan qof jilbajabsan oo labadible u xiran. Wuxuu u dhaaranayaa caalamka oo dhan. Markuu dhaaranayo oo hanjabayo iska daa wax kale e buuraha ayaa weesadu ka jabtaa! “Wallaahi gawrac wax aan ahayn idiin la iman meynno.” Ayuu kaamerada farayaa. Isaga oo kulleetiga dib u jiidaya qofkii kawaanka u saarnaa ayuu haddana dhaaranayaa:”Wallaahi thumma Wallaahi Ilaahay qoortiinna waa na solansiin doonaa!” Markaas ayuu caalamkii u labadiblaysnaa inta doc u legdey,surka ka jaray miskiin isla magaaladaas ka soo jeedo oo geeridiisa aan Washington, London iyo Berlin midna looga hurdoseegeyn.
Markii labaad, wuxuu ku soo dhex dhuuntay dumar ka soo qaxaya magaaladii uu wax ku gawrici jirey oo gacantooda ka sii baxaysa. Wuxuu qabaa jilbaab iyo niqaab. Wuxuu haatan dhex fadhiyaa dumarro iyo carruuro diifaysan oo isaga iyo ururkiisii doqonniinada ahaa ku soo hoos rafaaday. Wuxuu jilbaabka hoostiisa ku haystaa kudheel (toy) caag ah oo gabar ah (caruusad) oo ay gabdhaha yaryari ku cayaaraan, si loo moodo in uu yahay ummul aan weli 40 kii ka bixin oo gabar murjux ah dhowaan dihatey. Si loo hubiyo in ay yihiin xaasaskii argaggixisada dumarka meesha joogaa iyo in kale, ayaa baaritaan iyo weyddiimo lagu bilaabay. Abu Mujaahid Al-gawracaawi markii la soo gaarey ayaa la weyddiiyey magaceeda. Markaas ayey inta gabadhii caagga ahayd naaskeeda timaha adag leh afka u gelisey tiri “ Ummu Samiirah Al-ummulaawi!”
Adduunka lagu ma argaggixin karo dad daaro dhaadheer laga soo tuuray, kuwo dab la qabadsiiyey, kuwo iyaga oo shabaq bir ah ku xiran biyo la quusiyey oo la hafiyey. Adduunka lagu ma bajin karo dad boqollaal ah oo beerka loo seexiyey oo boobeyaal lagu bilbilay. Intaas oo fal waxashnimo ah iyo ka daran waxaa samaysay Daacishtii Mowsil. Xaggee ku dambeeyeen? Waxashnimo waa loo qiray, laakiin se guul ma loo qoray?
Miyir waxad ku weydaan is waal kuma mihiibtaane
Muslin kuma cabiidsamo wallaan madaxa kaa goyne
Muggiis weel ma dhaafee Allow mooska yaan jebinnin. – Saahid Qamaan.
Qoraa: Maxamed Aadan Ciiraale